Australian Catholic University - Kudzidza muAustralia
guta : North Sydney
Acronym : Chii
inotangwa : 1991
Musakanganwa kuti kurukura Australian Catholic University
Kunyoresa nenguva Australian Catholic University
Australian Catholic University (Chii) ari pachena kwete-nokuti-purofiti yunivhesiti mari nehurumende Australian.
Zviri pachena kuti vadzidzi uye tsvimbo zvitendero zvose.
Australian Catholic University (Chii) unogadzirira yeKaturike Intellectual Tradition kuunza akasiyana maonero kuti dzakakwirira education.We kuongorora nemagariro, mumagariro, yetsika uye vezvitendero nyaya kuburikidza izvo yeRoma Intellectual Tradition tichidzidzisa, tsvakurudza uye basa.
By anosimbisa uye mberi nokuziva dzidzo, utano, komesi, chokuita nevanhu, ari sayenzi uye ruzivo, mutemo, uye rokusika hwemashiripiti, Chii chinowedzera dzayo dzemunharaunda, dzakawanda munharaunda.
Vakapedza kudzidza kwedu chichange unyanzvi vakasarudzwa minda yavo, yetsika mumaitiro avo, aine dzakabudirira kutsoropodza tsika pfungwa, ane kukoshesa chitsvene muupenyu uye kuzvipira kushumira vanhuwo zvakanaka.
The Company vokuAustralia Catholic University (Chii) rakabvumira Mission Statement (“The Chii Mission”) panguva 23 Chivabvu 2014 Annual General Meeting.
Chii inzvimbo huru kusangana nevanhu uye vane zviitiko itsva.
Mumwe kembasi mudzidzi kushamwaridzana inoshanyirwa zviitiko zvakadai barbecues, balls uye Concerts. Panewo makirabhu, nzanga uye zviitiko zvemitambo akadai Chii Games uye University Games.
Education uye Arts - nzvimbo anosanganisira dzidzo, unyanzvi uye nevanhu, Zvidzidzo pose uye kukura zvidzidzo dzakawanda, zvenhau kukurukurirana, mumagariro sainzi, youth basa, uye rokusika musekiwa, ziso musekiwa uye magadzirirwo.
Health Sciences - nzvimbo anosanganisira mazano, kwezvakatipoteredza sainzi, maekisesaizi physiology, maekisesaizi sainzi, chepfungwa, kusununguka, ukoti, Occupational kurapa, paramedicine, physiotherapy, voruzhinji utano, wepfungwa, munzanga basa uye kutaura zvokurwara.
Mutemo Business - nzvimbo zvinosanganisira vazvidavirire uye mari, bhizimisi Kutarisirwa, komesi, hwevanhu Resource utariri, ruzivo rwokugadzira, mutemo, utariri, Kushambadzira uye Occupational utano, kuchengeteka uye Environmental Management.
Theology uye Philosophy - zvose nokuranga izvi zvinokurudzira vadzidzi kuti vatsvake uchenjeri, ruzivo uye chokwadi.
Unoda kurukura Australian Catholic University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Australian Catholic University musi Map
Photos: Australian Catholic University pamutemo Facebook
Australian Catholic University wongororo
Join kukurukura vokuAustralia Catholic University.
Thiruvananthapuram University of Technology Brisbane